Ihowuliseyili BK5030 cnc nkqo Slotting umatshini yoMvelisi kunye noMthengisi | Lu Omncinci
BK5032 CNC umatshini ekufakwa ibhekisa kwisixhobo umatshini esebenzisa isindululo nkqo buyisela isixhobo slotting ukuba slotway umngxuma. Isixhobo sebar esandisela phezulu ukusuka ebhedini ngomngxunya wokusebenza, kunye nesixhobo sokufaka, senza intshukumo ephambili inyuke isezantsi ngelixa isenza intshukumo yokutya okuphakathi. Kufanelekile ukuba kulungiswe isitshixo kumngxuma wamalungu amakhulu (njenge-propeller).
1.Ukulungele ukuqhutyelwa kweendlela eziphambili, i-splines, kunye nemingxunya engaboniyo.
2. Ukuqhubekeka kwamalungu amile okhethekileyo: Ukulungiswa kwendlela ephambili kumngxunya ongaboniyo kunye nendlela engalinganiyo kumngxunya ongaboniyo kufezekiswa kukuhamba komgama wenkunzi yegusha kunye ne-axis yesine yokujikeleza.
3. Isithuthi esiphambili se-Servo: Uqwalaselo lweemoto eziphambili ze-servo lunokuqonda uhlengahlengiso ngokungahambelaniyo nendawo kwaye lugqibe ukwenziwa kwemisebenzi ekhethekileyo.
4.Umjelo kaloliwe okwexeshana ngumgaqo kaloliwe okhethiweyo.
Umzekelo Icandelo BK5030
UMax. Ubude beRam mm 300
Ukulungelelanisa ukuhamba kweRam mm 75
Inani leentshukumo zeRam n / min 30-180
Ubungakanani betafile mm 550 * 405
ukuhamba kwetafile (X, Y) mm 280 * 330
Umgama phakathi kwe-Axial Line ye-Toolhead Ukunikela iHole
ukuya ngaphambili kwengalo yeKholamu mm 505
Umgama phakathi kokuphela kwesicwangciso seThuluzi elinoThwala lokuHola ukuSebenza mm 540
X yeeMoto iTorque (NM) 6
I-Torque yeemoto (NM) 6
Ukuhamba ngokukhawuleza X (m / min) 5
I-Screw yebhola (X) FFZD3205-3 / P4
I-Ball Screw (Y) FFZD3205-3 / P4
Amandla ombane aphezulu weServo KW 3.7
Umatshini wokufaka usetyenziselwa ukuqhubekeka kwendlela yangaphakathi okanye umngxunya osisongelo kwimveliso enye okanye encinci yemveliso Inokuphinda isebenze imingxunya ethe tyaba, isikwere okanye ipholigoni, njl. Ihlala ithathelwa indawo kukugaya okanye ukukroba kwimveliso yobuninzi.
Iibhokisi ezenziwe ngomthi ezingenafutha ngaphandle zikhuselwa kubumanzi; lo matshini ulungele i-LCL.
Egqithileyo B635A Ebumba i-mahcine
Okulandelayo: CK6140 Isikhululo se-4 somatshini wombane cnc lathe ngesinyithi
AWR25 diamond ukusika cnc lathe yevili ingxubevange ...
CK6163 Heavy umsebenzi tye izixhobo 4 isikhululo CN ...
Ixabiso SM325 mveliso cnc swiss uhlobo lathe machin ...
vmc1060 mveliso metal 3 axis nkqo cnc milli ...